Magaalota adda addaatti gocha naannoo Amaaraatti masjiidota gubuu balaaleffachuun hiriirri taasifame - BBC News Afaan Oromoo
Magaalota adda addaatti gocha naannoo Amaaraatti masjiidota gubuu balaaleffachuun hiriirri taasifame
Madda suuraa, AMMA/FB
Hiriira guyya har'aa magaalaa Waldiyaa taasifame jedhame irratti jiraattonni miidiyaale loogummaan kan himatanis turani
Naannolee Itoophiyaa magaalota adda addaa keessatti namoonni masjiidota torbee darbe naannoo Amaaraa Godina Goojjam Bahaa magaalaa Moxaatti gubattan balaaleeffachuun guyyaa har'aa hiriira bahan.
Haleellaa Ministira Abiy Ahimad dabalatee qondaaltonni mootummaa kaan balaaleeffatan kana jiraatonni magaalota adda addaas balaaleffachuun kun torban kana keessa bakka gara garaatti bahamaa tureera.
Hiriira har'aa kana qaamni ifatti waame beekamuu baatus barsiisonni amantiifi namoonni hawaasa musliimaa biratti dhageetti akka qabanitti amanaman ergaawwan waamicha hiriiraa nagaa dabarsaa turan.
Kanneen ergaa kana dabarsan keessaa barsiisaa amantaafi falmaa mirga amantaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu tokkodha.
Torban darbe gaafa Jimaataa galgala magaalaa Moxaatti masjiidonni afur akka gubatan Manni Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsee ture.
MM Abiy Ahimad haleellaa manneen amantii irratti raawwate balaaleeffatan
Mootummaan naannichaa garuu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennaa hin jiru jechuun qeequ Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Ustaaz Kaamil magaalota kanneen akka Arsii Nageellee, Dambi Dolloo, Marsaa, Makaanasalaam, Harbuu, Baddalleefi kaan birootti hiriirri taasifamu fuula Fesbuukii isaaniirratti barreessaniiru.
Gaazexeessaan BBC magaalaa Adaamaatti argamu akka jedhettis hiriirri magaalichatti har'a ganama taasifamuuf ture adda citeera.
Magaalaa Mooxaatti manneen amantaa akkamitti gubatan?
Guyyaa har'aa naannoo Amaaraa magaalaa Daseefi Waldiyaattis hawaasni bahuun waan torban darbe magaalaa Moxaatti raawwate akka balaaleffate Miidiyaan naannoo Amaaraa gabaaseera.
Hiriira guyya har'aa magaalaa Waldiyaa taasifame jedhamene jiraattonni gabaasa miidiyaales komataniiru
Akka gabaasa kanaatti, magaalaa Waldiyaatti jiraattoni 'mootummaan kanneen manneen amantiirratti haleellaa raawwatanirratti tarkaanfii fudhachuu qaba,' jechuun gaafataniiru.
Dabalataanis, kanneen hiriira bahan keessaa kanneen miidiyaaleen masjiidota gubatan gabaasuurratti loogii gochaa akka jiru barreeffama balaaleffatu qabatanii bahaniiru.
Haleellaa manneen amantaa irratti raawwate walqabatee 22 to'annoo jala olfaman
Torban ar'aa gaafa Jimaataa galgala magaalaa Moxaatti mana Kiristaanaa Ortodoksii keessa ibiddi erga ka'e jedhamee booda ture masjiidonni afuriifi manneen daldalaa hordoftoota Islaamaa kan gubatan.
Suuqiiwwan daldalaafi gamoo tokko bala aibiddaan kan miidhame ta'us lubbuun namaa darbe garuu hin turre.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad erga gara aangootti dhufanii rakkoowwan waldhibdee manneen amantii garaa garaa keessa turan akka hiikaman carraa guddaa taasisaniiru.
Manni Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa gubachuu masjiidotaafi manneen daldalaa naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa magaalaa Moxaatti dhalatee ture balaaleffachuun ibsa geezexeessitootaaf kennee tureen gocha sana balaalleeffate ture.
Manni maree kun ibsa baaseen mootummaan naannoo Amaaraa namootaafi garee yakka aadaa wal danda'uu amantaa gara garaa gidduu ture diige jedhe kana keessatti hirmaatan haala iftoomina qabuun seeratti akka dhiyeessuu qabu gaafatee ture.
Miidhaa qaqqabe qorachuu keessatti tumsa barbaachisu akka taasisuufi masjiidota gubatan akka deebiyee ijaaruufi badii uumameefis dhiifama akka gaafatus gaafatee ture manni marichaa.
kana ta'uu baannaan jedha ibsa baaseen manni maree kun gocha badii faallaa seera amanataafi seera biyya lafaa ta'eefi aadaa waldanda'uu biyyattii keessa ture diigu kana mormuudhaaf fuula duratti Finfinneetti hiriira waamuuf akka jiru mootummaaf gaaffii dhiyeessee ture.